DOWNLOAD သည့် F-14D Tomcat + တဟီတီရှုခင်း + လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Glenn သင်္ဘော USS FS2004 - Rikoooo
F-14D Tomcat + တဟီတီရှုခင်း + လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွင် Glenn သင်္ဘော USS FS2004
အရွယ် 43.3 ကို MB
downloads ရယူရန္ 40 085
Author: အိုင်ဗင် Kostic, စတိဗ် Hinson ဂျွန် J ကို Schumacher
ဗီဒီယိုများနိူးများအတွက်တစ်ဦးကထိပ်တန်းလေယာဉ်တင်! F-14d Tomcat သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ burner နဲ့မြို့ရိုးကိုအပြီးအတူတက်လာပါတယ်။ ပြင်ပအမြင်ဤနေရာသို့သွားရန်နှင့်အသံအတားအဆီးဖြတ်သန်းသည့်အခါထိုပေါက်ကွဲသံကြီးကိုစောင့်ရှောက်မည်! အဆိုပါလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုချွတ်ကြိုးတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလေယာဉ်ပျံဒီစနစ်နှင့်အတူ 10 မီတာအတွင်းတွင်ရပ်လိုက်နိုင်သည်။ လောက်လွှဲ မှနေ. လွှတ်အလွန်တိုတောင်းသောအကွာအဝေးပေါ်တွင်သင်တွန်းအားပေးလိမ့်မည်။ F14, Auto-လေယာဉ်မှူးများအတွက်ထူးခြားသောအသံ (ထောက်ပံ့အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ကကားရှေ့မှနျမှအထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်၌တည်ရှိ၏။
ဤသည်လေယာဉ်ပျံသည်သင်၏အပျြောအပါးအဘို့အ 8 repaints နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါ့အပြင်တဟီတီ၏ဤ add-on, ကျွန်းနှင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Glenn နှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်။
လေဆိပ် ID ကိုလယ်ကွင်းထဲမှာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောအမျိုးအစားမှပယ်ယူ Glen ပြတင်းပေါက် "ကို Select လုပ်ပါလေဆိပ်" မှ
လယ်ပြင်လေဆိပ် ID တွင်တဟီတီအမျိုးအစားထဲမှာလေဆိပ်ကနေချွတ်ယူ NTAA လေဆိပ်ကနေ "လေဆိပ်ကို Select လုပ်ပါ"
F-14 ပျံသန်းဖို့သင်ထုတ်လုပ်သူရွေးချယ်ရမည် Grumman လေယာဉ်စာရင်းထဲက
၏စာကြည့်တိုက်ထဲတွင်ရှုခင်းတဟီတီ၏ကြေညာစာတမ်း FSX အလိုအလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် add-on တစ်ခု SUPER ကြောင့်လက်လွတ်မလုပျဆောငျရမညျဖွစျသညျ။ တဦးတည်းအခြမ်းတွင်လေယာဉ်ပျံကကမ္ဘာပေါ်မှာအသေးဆုံးလေဆိပ်ပေါ်ဆင်းသက်နိုင်သောထိုကဲ့သို့သောဘရိတ်ရှိပါတယ်။ ချဉ်းကပ်နည်း: 120-130 မိုင်။ ရိုးရာချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်မထားပါနဲ့။ 120-130 မိုင်မှာလေယာဉ်ပြေးလမ်း၏အဆုံးကိုကိုက်ဖို့နောက်ဆုံးသောကာလအဘို့အစောင့်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုလေယာဉ်ပျံကအလွန်မြန်နှုန်းမြင့်ရောက်ရှိနိုင်စွမ်းကြောင်းထိုကဲ့သို့ပါဝါရှိပါတယ်။ အသံကမြို့ရိုးကိုအလွန်လျင်မြန်စွာရောက်ရှိသည်။
မစ်ဆူဘီရှီက F-2A FS2004